Steel Sodina Painting Machine - China Wan Run Da High Tech
Overview WRD Sodina hoso-doko pamokarana andian-dahatsoratra dia tsara ho an'ny rehetra ny atrikasa fandaharana. Ity manaraka ity sary hosodoko pamokarana sodina no ampiasaina amin'ny sodina hoso-doko amin'ny savaivony eo amin'ny 20mm ny 76mm ary 6 metatra ny halavany. Tena hanao izay rehetra endrika manokana ny fantsona hatao voaloko tsara ary tsy misy scratches sy ny loko taorian'ny voina misy ny ambonin'ny sodina. Izany no mandroso indrindra amin'ny famolavolana area.Pipe ity size: Diameter: φ20mm-φ76mm Length: 4-6 metersWall hatevin'ny: 1.0-5.0mmProduction hafainganam-pandehany: 40 metatra / minProc ...
Overview WRD Pipe painting production line series are suitable for all the workshop arrangement. This following pipe painting production line is used for pipe painting with diameter between 20mm to 76mm and 6 meters length. It’s special design make all the pipes get painted well and no scratches and paint removals exist on pipe surface. It is the most advanced design in this area.Sodina habe:Savaivony: φ20mm-φ76mm
Length: 4-6 metatraWall hateviny: 1.0-5.0mmProduction hafainganam-pandehany: 40 metatra / minProcess mikoriana:
Sodina sakafo sehatra → Pneumatic hampisy → Pneumatic nizara → Electric hampisy 1 # → Longitudinal hetsika → Paint tifitra fitaovana → sodina mifarana milamina manosika → Electric hampisy 2 # → Transverse mampihetsi-po mafana paharitry sehatra 2 # → Electric hampisy 3 # → Ampitao horonan-taratasy-pandriana → Electric nampientam-po 4 # → Ampitao horonan-taratasy-fandriana → Electric hampisy 5 # → Storage sehatra
Tsipika Production fifehezan sy ara-teknika fikirana
Transverse mampihetsi-po fanafanana sehatra 1 #
Izany dia ahitana ny ampahany telo transverse rojo, fanafanana trano, herinaratra sy reducer maotera. Ny elanelana eo amin'ny rojo vy roa, 'mpiray dia 50.8mm, ny rojo zana-kazo hanangana endrika V-fantsona. Ny rojo voaroaka kodia dia mety ho Adjustable ny visy. Reducer iray ho an'ny herinaratra maotera, karazana XWD8-87-7.5. Ny efitra fanafanana izay mandatsa-dranomaso na mampiasa herinaratra toy ny loharano mafana, nafanaina ny fantsona hatramin'ny 30 ambaratonga. Ny efitra fanafanana dia nomen'ny
Pneumatic nampientam-po sy ny fanapariahana
Ny fantsona avy any ambony dia nafindra anjara eto, ary ny sasany nijanona fisaka izay mety ho Adjustable araka ny haben'ny sodina. Varingarin'i QGBQ100-210P3 manampy manao ny pneumatic mampisamboaravoara ny fantsona tsirairay amin'ny sehatra hafa. Pneumatic mpizara, manandratra ny hazo fisaka, ka midina, araka ny haben'ny sodina rehefa sodina iray no nahatonga ny sehatra. Mizara Varingarin'i: QGB50-80-S
Electric nampientam-po 1 #
Nifandimby sodina-dia mifandray amin'ny gadra. Tandremo ny V-fantsona endriky miakatra. Ny maotera mitarika ny sandriny ny sodina-miodina kosa dia avy ny fantsona dia nafindra tany longitudinal hetsika horonan-taratasy-lalana. Tandremo ny afovoany lavidavitra roa endrika V-fantsona sy ny sodina-miala toy izany koa. Electric hampisy karazana moto: XWD8-87-7.5. Ny fitambaran'ny halavan'ny-lalana ny horonan-taratasy dia 13 metatra.
Longitudinal hetsika horonan-taratasy-lalana
.There dia 4 longitudinal hetsika horonan-taratasy-lalany; samy entin'ny ny maotera amin'ny reducer. Motor karazana: YVP100L1-4; mampihena ny karazana: GR87-Y2.2-4P-37-M1.
Lokoy tifitra efitrano
Misy loko roa fanafody efitra eo amin'ny hetsika longitudinal horonan-taratasy-dian-tongotra. Fantsona mifindra amin'ny horonan-taratasy-lalamby ka handeha hitety ny loko tifitra sprayed efi-trano ary hatao ao.
Longitudinal hetsika horonan-taratasy-lalany, 4 anjara.
Sodina mifarana milamina manosika
Fantsona nifindra tany amin'ny faran'ny longitudinal horonan-taratasy-lalany, misy rafitra ny hanosika ny sodina mifarana madio sy milamina. Ny haben'ny hanoto varingarina isφ160 × 250. Izany manosika rafitra afaka manova ny toerana amin'ny alalan'ny fanitsiana T fantsom mba hahazoana antoka ny fantsona dia azo apetraka ao amin'ny foibe, rehefa tonga ny fantsona amin'ny hetsika transverse horonan-taratasy-làlana # 2.
Electric nampientam-po 2 #
Nifandimby sodina-dia mifandray amin'ny gadra. Tandremo ny V-fantsona endriky miakatra. Ny maotera mitarika ny sandriny ny sodina-miodina kosa dia avy ny fantsona dia nafindra avy longitudinal hetsika horonan-taratasy-lalana ny hetsika transverse horonan-taratasy-làlana 2 #. Tandremo ny afovoany lavidavitra roa endrika V-fantsona sy ny sodina-miala toy izany koa. Electric hampisy karazana moto: XWD8-87-7.5.
Transverse mampihetsi-po fanafanana sehatra 2 #
Izany dia ahitana ny ampahany telo transverse rojo, fanafanana trano, herinaratra sy reducer maotera. Ny elanelana eo amin'ny rojo vy roa, 'mpiray dia 50.8mm, ny rojo zana-kazo hanangana endrika V-fantsona. Ny rojo voaroaka kodia dia mety ho Adjustable ny visy. Reducer iray ho an'ny herinaratra maotera, karazana XWD8-87-7.5. Ny fitambaran'ny halavan'ny horonan-taratasy-lalana dia 24 metatra. Efitra fanafanana heats ny fantsona hatramin'ny ambaratonga 100-150.
Herinaratra indray sodina-3 #
Nifandimby sodina-dia mifandray amin'ny gadra. Tandremo ny V-fantsona endriky miakatra. Ny maotera mitarika ny sandriny ny sodina-miodina kosa dia avy ny fantsona dia nafindra avy transverse hetsika horonan-taratasy-lalana ny horonan-taratasy famindrana-lalana. Tandremo ny afovoany lavidavitra roa endrika V-fantsona sy ny sodina-miala toy izany koa. Electric hampisy karazana moto: XWD6-71-5.5
Total halavan'ny horonan-taratasy famindrana-lalana dia 58 metatra, rojo karazana. Izany no entin'ny 3 Motors amin'ny reducer. Reducer karazana: GR47-Y4.0-4P--M1-180 10.15. Misy horonan-taratasy manohana fingotra eo amin'ny rojo mba hisorohana ny Scratch amin'ny sodina ambonin'ny. Ny elanelana eo amin'ny rojo vy roa, 'mpiray dia 38.1mm.
Sodina-Electric kosa 4 # sy 5 #
Nifandimby sodina-dia mifandray amin'ny gadra. Tandremo ny V-fantsona endriky miakatra. Ny maotera mitarika ny sandriny ny sodina-miodina kosa dia avy ny fantsona dia nafindra avy amin'ny horonan-taratasy famindrana-lalana ny fitehirizana sehatra. Tandremo ny afovoany lavidavitra roa endrika V-fantsona sy ny sodina-miala toy izany koa. Electric hampisy karazana moto: XWD6-71-5.5
Tongasoa eto amin'ny hahazoana ny avo lenta vy sodina sary hosodoko milina amintsika. Isika dia iray amin'ireo mpitarika Shina mpamokatra sy mpamatsy ny orinasa mpamokatra entana isan-karazany milina fitotoam-bary Tube. Tongasoa eto amin'ny lisitra mijery ny vidiny sy ny teny nindramina aminay.
Next: HG165 × 6.0mm Ny ventin-HF welded Sodina Mill-dalana, Technical fikirana
Arc tenan'ny Machine
Automatic tenan'ny Machine
Borosy Paint Machine Fa Steel Sodina
Painting sodina Machine
Vovoka Coating price Booth
Vovoka Painting Fitaovana
Vovo-tenan'ny Painting Machine
Powder fanafody Machine
Tenan'ny Paint Machine Fa Steel Sodina
Tenan'ny Painting Fitaovana
Tenan'ny Painting Machine
Steel Sodina Paint tenan'ny-dalana,
Steel Tube Airless tenan'ny Painting Machine